पोस्ट गरिएका अप्रिल 28, 2021 द्वारा Kevin J. Mullins भित्र Character of God
त्यहाँ धेरै धार्मिक नेताहरू थिए जसले मानिसहरूलाई येशूले सिकाएको कुरा मन पराउँदैनथे। तिनीहरू असाध्यै चिन्तित भए कि धेरै मानिसहरू परमेश्वर र उहाँको चरित्रको बारेमा तिनीहरूका प्रश्नहरूको उत्तर दिन येशूकहाँ जाँदै थिए। यी नेताहरू जनतालाई सबै जवाफको लागि तिनीहरूकहाँ जान चाहन्थे। तिनीहरूले येशूबाट छुटकारा पाउन उपाय खोज्नु परेको थियो। तिनीहरू येशूलाई पक्रने योजना बनाए।
एक रात येशू आफ्ना घनिष्ठ मित्रहरूसँग हुँदा, तिनीहरूमध्ये कोही-कोही नेताहरू र केही रोमी सिपाहीहरू उहाँलाई लैजान आएका थिए। येशूका एक साथी,पिटर नाम गरेको, यस बारे मा वास्तवमै चिन्तित भयो, त्यसैले उसले तरवार निकाल्यो र उसले पुरूषको कान काटिदियो! आउच! तपाईंको विचारमा येशूले पत्रुसलाई के भन्नुभयो? के तपाईंलाई लाग्छ कि उनले भने, "राम्रो काम पत्रुस!"? के येशू खुसी हुनुहुन्थ्यो कि उसको साथीले उसलाई यसरी मदत गर्न खोज्यो? होइन, उहाँ हुनुहुन्नथ्यो।
उसको कान काटिएको मानिसको नाम माल्कस थियो। जब येशूले माल्कसलाई दुःखी र पीडा भएको देख्नुभयो, उहाँ त्यहाँ पुग्नुभयो र उसको कानमा भएको स्थान छोइदिनुभयो र उसलाई निको पार्नुभयो। येशूले माल्कसलाई एकदमै नयाँ कान दिनुभयो! बाइबलबाट यो कथा पढौं:
यदि तपाईले अरु कोही मानिसहरु तपाईको एक जना साथीहरु संग दयालु छैनौं भने के गर्नुहुन्छ? पत्रुसले कस्ता शान्तिमय कार्यहरू गर्नुपर्ला भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ? येशू जान्नुहुन्छ कि निर्दयी व्यक्तिहरूप्रति दयालु हुनु हाम्रो लागि प्राकृतिक कुरा होइन। त्यसकारण हामीले येशूसँग सहायता माग्नु पर्छ। जब कसैले तपाइँलाई नराम्रो व्यवहार गर्दैछ, येशू तपाईको हृदयमा प्रवेश होस् भनेर प्रार्थना गर्न कोशिस गर्नुहोस् उहाँ अरूसँग जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ।ताकि तपाईं अरूलाई उहाँले जस्तो व्यवहार सक्नुहुन्छ। येशू तल के भन्नुहुन्छ ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस्:
तिमीले यसो भनेको सुनेका छौ, "आफ्ना साथीहरूलाई प्रेम गर्नुहोस् तर आफ्ना शत्रुहरूलाई घृणा गर्नुहोस्।" ~ मत्ती ५:५३।
ओहो! त्यहाँ एक सेकेन्डको लागि रोक्नुहोस्। के तपाईंले सुन्नुभएको छ कि मानिसहरूलाई यो भन्दा पहिले? तपाईंले यो भनेको सुन्न सक्नुहुन्न, तर यो धेरै व्यक्तिहरूले कार्य गर्दछन्।
देखेर उहाँलाई भने,
“प्रभु, के हामी तरवार चलाऔं?” तिनीहरूमध्‍ये एक जनाले प्रधान पूजाहारीको नोकरलाई हान्‍यो, र त्‍यस माल्कसको दाहिने कान च्‍वाट्टै काटिदियो। तर येशूले भन्‍नुभयो, “भयो,
अब यसो नगर।” अनि त्‍यस मान्‍छेको
कान छोएर उहाँले त्‍यसलाई निको पारिदिनुभयो।~ लूका २२: ४९-५१; यूहन्ना १८:१०।
वाह! यद्यपि ती मानिसहरू उहाँलाई पक्रन आएका थिए, तर येशू उनीहरूप्रति दयालु हुनुहुन्थ्यो। माल्कसले येशूलाई चोट पुर्याउन खोजिरहेका थिए तर येशूले उसलाई निको पार्नुभयो र माल्कसलाई मदत गर्नुभयो।
हाम्रो साथीलाई माया गर्नु सजिलो छ, तर हाम्रो शत्रुलाई प्रेम गर्नु त्यति सजिलो छैन, जो सधैं हामीलाई चोट पुर्‍याउने प्रयास गर्दछ। के तपाई कसैको बारेमा सोच्न सक्नुहुन्छ जो तपाईप्रति दयालु छैन? हुनसक्छ ती व्यक्ति तपाईमाथि हाँसे वा तपाईंलाई धक्का दिए। आउनुहोस् हामी पढ्न जारी राखौं र हेरौ येशू के भन्नुहुन्छ हामी कसरी मानिससँग व्यवहार गर्छौं: त्यस जो समय मा मतलब काम गर्ने मानिससँग व्यवहार गर्ने सम्बन्धमा
तर म तिमीलाई भन्छु कि आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर अनि जो कोही तिमीसंग छ, उसको लागि प्रार्थना गर। त्यसो भए तपाईं स्वर्गमा बस्नुहुने पिताको जस्तो व्यवहार गर्नुहुनेछ।~ मत्ती ५:४४-४५।।
के त्यो अचम्मको छैन? येशूले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूलाई प्रेम गर्न र हाम्रो लागि जो कोहीलाई पनि प्रार्थना गर्न भन्नुहुन्छ। जे भए पनि ती हाम्रोलागि अर्थपूर्ण छन्, हामीले उनीहरूलाई अझै पनी माया गर्नुपर्दछ उनीहरू जे गर्छन् वा जे भन्छन्।
"तर हामीले उनीहरूको लागि किन प्रार्थना गर्नुपर्छ?" तपाईं सोध्न सक्नुहुन्छ, "तिनीहरूलाई मद्दतको खाँचो पर्दैन।" त्यो ठूलो प्रश्न हो। यो पक्कै पनि यस्तो देखिन्छ कि जसलाई वरपर धकेलीएको छ र हाँस्दै छन् जसलाई सबैभन्दा मद्दत चाहिन्छ। तर यसलाई अर्को तरिकामा सोच्नुहोस्। यदि कसैले तपाइँलाई केवल गल्ती गरेकोमा हाँस्दछ भने, तपाइँले गर्नुपर्ने सबै तिनीहरूलाई बेवास्ता गरेर टाढा जानु पर्छ।वा हुनसक्छ तपाई उनीहरूसँग यसको
बारेमा हाँस्न कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जब तिनीहरूले देख्दछन् कि यसले तपाइँलाई दु: ख गर्दैन, तिनीहरू प्रायः रोकिन्छन्।केटा वा केटी जो हाँस्दै छन् र मतलब भइरहेको छ कहिलेकाहीं दयालु हुन वास्तवमै गाह्रो लाग्न सक्छ। हुनसक्छ कोही मानिस जहाँ उनी बस्छन् सँधै तिनीहरुको लागि अर्थ हुन्छ र यो त्यस्तो तरिका हो जुन उनीहरूले कसरी व्यवहार गर्ने जान्छन्। यदि तपाईं वास्तवमै यसको बारेमा सोच्नुहुन्छ भने, जसको अर्थ भइरहेको छ त्यो हो जसलाई थप सहयोग चाहिन्छ। व्यक्तिले जति काम गर्छ, त्यति नै उसलाई येशू चाहिन्छ। त्यसो हो, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। तिनीहरूका लागि प्रार्थना गर्नुहोस् किनकि तपाईं उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ, यदि उनीहरू तपाइँको लागि अर्थ भइरहेको छ भने पनि।
येशू त्यस क्रूसमा मर्नु भन्दा केही घण्टा टाढा हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ ती मानिसहरूलाई चिन्नुहुन्थ्यो जो वास्तवमै उनीहरूलाई सहयोगको खाँचोमा परेका थिए। त्यसैले उहाँ तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँलाई थाहा थियो कि पिताले उसलाई फेरि जीवित पार्नुहुनेछ। येशूले आफ्ना पितालाई विश्वास गर्नुभयो। अरूले पनि उहाँमाथि भरोसा राखोस् भनेर उनले प्रार्थना गरे। तर वास्तवमा उनीहरूले येशू वा उहाँको पितालाई माया गर्दैनथे। उनीहरू आफ्नो प्रेमको सन्देश संग केहि गर्न चाहँदैनथे। येशू तिनीहरूका निम्ति दुःखित हुनुभयो। उहाँलाई थाहा थियो कि उनका पिताले सबैलाई क्षमा गरिसक्नु भएको थियो। के जस्तो भयो त्यसका आफन्तहरू सबैले विश्वास गरेका थिए। उनले प्रार्थना गरे कि उनीहरूले परमेश्वरको क्षमा स्वीकारून् र परमेश्वरको बच्चा हुने खुशीको अनुभव गरे, जसले हामीलाई प्रेम गर्दछ जुन हामीले गल्ती गरेका छैनौं। जब तपाईं कुनै गल्ती गरेकोमा दुःखित हुनुहुन्छ, स्वर्गमा हुनुहुने तपाईंको पिताले भन्नुभएका शब्दहरू सम्झनुहोस्:
परमप्रभु विगत समयमा हामीकहाँ यसो भन्‍दै देखा पर्नुभयो: “सधैँभरि रहने प्रेमले मैले तँलाई प्रेम गरेको छु। मैले तँलाई दया गरी खिँचेको छु।” ~ यर्मिया ३१:३।
तपाईंको लागि परमेश्वरको प्रेम "अनन्त" हो। यसको मतलव तपाईको लागि उसको प्रेमको कहिलै अन्त्य हुदैन। त्यसोभए कृपया येशूले पृष्ठ १० को शीर्षमा भन्नुभएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा याद नगर्नुहोस्। उनले भने, जब हामी हाम्रो दुश्मनलाई प्रेम गर्दछौं र तिनीहरूका लागि प्रार्थना गर्दछौं, "तब तपाईं स्वर्गमा हुनुहुने आफ्ना पिताले जस्तो व्यवहार गर्नुहुनेछ।" त्यसोभए, हामी देख्न सक्छौं कि परमेश्वर आफैले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँलाई अझै पनी माया नगर्नेहरूलाई उहाँ प्रेम गर्नुहुन्छ। येशू भन्दै जानुहुन्छ:
तिमीहरूको भलाइ गर्नेहरूलाई भलाइ गर्दछौ भने, तिमीहरूलाई के लाभ भयो र? किनकि पापीहरूले पनि त्‍यसै गर्दछन्‌। तर आफ्‍ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, र तिनीहरूको भलाइ गर। फेरि पाउने आशा नराखी ऋण देओ, र तिमीहरूको इनाम ठूलो हुनेछ, अनि तिमी सर्वोच्‍चका सन्‍तान ठहरिनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र स्‍वार्थीमाथि कृपालु हुनुहुन्‍छ। तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभएझैँ, तिमीहरू पनि कृपालु होओ।~ लूका ६:३३, ३५, ३६।
के तपाईंले यहाँ येशूले भन्नुभएको कुरा देख्नुभयो? उहाँले भन्नुभयो कि परमेश्वर सधैं दयालु हुनुहुन्छ मतलब “धन्यवादी नभएकाहरू र दयालु मानिसहरूका लागि पनि ।” म प्रार्थना गर्छु कि तपाईंले परमेश्वरको चरित्र पहिलेको भन्दा अलि राम्रोसँग बुझ्न थाल्नुभयो। त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जो परमेश्वर बारे गलत कुरा भन्छन्। तिनीहरू भन्छन् कि उहाँ मानिसहरूलाई कष्ट दिन्छन् जो उहाँलाई उहाँलाई प्रेम गर्दैनन्। यस्तो प्रकारको शिक्षाले मानिसहरूलाई परमेश्वरसँग डराउँछ। उनीहरू डराउँछन् कि यदि उसले उनीहरूले भनेको कुरा मानेन भने उसले चोट पुर्याउँछ। तर हामीले सिकेका छौं कि उहाँ सँधै कोमल हुनुहुन्छ, उहाँप्रति धन्यवादी र दयालु हुनुहुन्छ जो कृतघ्न र उहाँलाई नै मतलब छ।